Flim2MM: Unknown (2011)
ဒေါက်တာ မာတင်ဟဲရစ်နှင့်ဇနီးဟာ သဘာဝသစ်ပင်တွေရဲ့ မျိုးပွားမှုရဲ့အသွင်ပြောင်းဖြစ်စဉ်အတွက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂျာမဏီရှိ ဇီဝနည်းပညာညီလာခံမှာ သုတေသန စာတမ်းဖတ်ဖို့ လာခဲ့ပါတယ် ။
ဒေါက်တာ မာတင်ဟဲရစ်ဟာ လေဆိပ်ကနေ ဟိုတယ်ကို အသွား ဟိုတယ်အရောက်မှာ လေဆိပ်တွင် မိမိလက်ဆွဲအိတ်ကျန်ခဲ့တာကို သိရပြီး လေဆိပ်ကို အိတ်သွားပြန်ယူဖို့ ကားငှားထွက်လာခဲ့တယ် ။ လေဆိပ်သွားတဲ့ လမ်းမှာပဲ ကားမတော်တဆမှု ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒေါက်တာ မာတင်ဟဲရစ် လေးရက်အကြာ သတိမေ့ပြီး ကိုမာဖြစ်ခဲ့ရတယ် ။
ဇီဝနည်းပညာညီလာခံရှိတာကြောင့် အချိန်ဆွဲမနေပဲ ဆေးရုံကနေ ဇွတ်အတင်းဆင်းလာခဲ့ပြီး မိမိတို့ တည်းခိုရာ ဟိုတယ်ကို ပြန်လာခဲ့တယ် ။ ဟိုတယ် အရောက်မှာတော့ ဒေါက်တာ မာတင်ဟဲရစ် တစ်ယောက် မိမိဇနီးသည်ကို တွေ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် ဒေါက်တာ မာတင် ဟဲရစ်ကိုလည်း ထပ်တွေ့ရပြန်တယ် ။
ဒေါက်တာ မာတင်ဟဲရစ်ဟာ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု မှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးမှု ၊ မိမိကိုယ်ကို မည်သူမည်ဝါဆိုတာ အမှတ်မှားမှု ၊ စိတ်ကူးယာဉ်မှုတွေကနေ မိမိဘဝအစစ်ကို ဘယ်လိုပြန်ရှာမလဲ ။ "လူတွေက ကိုယ့်ကို ဘာဆိုတာ သတ်မှတ်တဲ့ အရာ" နဲ့ တကယ်တမ်း "ကိုယ်က ဘာလဲ" ဆိုတဲ့ စိတ်နှစ်ခုရဲ့ တိုက်ပွဲပေါ့ ။
ဘယ်တစ်ခုက နိုင်မယ် ထင်လဲ ......
ဘာသာပြန်ကတော့ .... Tlopp ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Wai Linn Kyaw
[FORMAT]:………………………….:) BRRip / 1280p HD
[GENRE]:……………………….… .:) Adventure, Mystery, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 815 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 53 mins
[Translated By]:………….........:) Tlopp
[Encoded By]:...................... :) R!B
Labels: Action, Hollywood, Mystery, Thriller
အားလုံးသိဖူးပြီးသား ရုပ်ရှင်ကားကောင်းဖြစ်တာကိုတော့ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အခုပြောပြချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားကြီး Tom Ha...
"အပိုလို ၁၁ အာကာသယာဉ်သာ လကမ္ဘာပေါ်ကို ပထမဆုံး ခြေမချနိုင်ခဲ့ရင် ဘာတွေဖြစ်လာမယ် ထင်သလဲ" ဒီမေးခွန်းနဲ့ ခေါင်းစားနေတဲ့ အမေရိကန...
God ကို အပြစ်တင်ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်ပါ။ High-Concept Comedy ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Bruce Almightyနဲ့ မိတ်ဆက်ေ...
ညီငယ် မောင်ဦး ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ဂျက်ကီချန်း ဇာတ်ကားဟောင်းတကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဂျက်ကီ့အနေနဲ့ မိန်းမချောသုံးယောက်နဲ့အတူတူ ဒုတိယကမာ...
မိန်းမတိုင်းဟာ တစ်သက်မှာ တစ်ခါတော့ သူတို့ ယောက်ျားတွေကို သတ်ပစ်ဖို့ စဉ်းစားဖူးတယ် တဲ့ ..... ခင်ဗျားဟာ အိမ်ထောင်သည်ဆိုရင် ခင်ဗျားရ...
ဂျက်ကီးချန်းဇာတ်လမ်းတပုဒ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီး၊ သွက်သွက်လက်လက် အက်ရှင်ခန်းတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းမြှုပ်ကွက်လေးတွေကြောင့် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး...
Ong-Bak မင်းသားလို့ သိကြတဲ့ Tony Jaa ရဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့အဓိက ထူးခြားချက်က ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ ရပ်နားခြင်း...
The Hangover 1+2+3
Shanghai Noon & Knight